Amaphrojekthi weHardware wamahhala angama-5 esingawakha ngezicucu zeLego | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
UJoaquin Garcia Cobo | | imfundo, Ukuphrinta kwe-3D, I-Robotics
I-Hardware yamahhala isibe uhlobo lwehadiwe olusetshenziswa ngokuya ngokufunwa. Isizathu salokhu ukuthi intengo yayo ephansi nesoftware ebanzi ehambisanayo yenza ukuthi itholakale kuwo wonke umuntu. Kwenzeka okufanayo ngezicucu zeLego, ithoyizi elithandwa kakhulu futhi elisetshenzisiwe elenza libekhona emakhaya amaningi futhi futhi linamanani aphansi kakhulu ukuze thina esingadlali ngezicucu zeLego, sikwazi ukuthenga lolu hlobo lwezingcezu.
Ngokulandelayo sizokhuluma ngakho Amaphrojekthi wamahhala we-Hardware we-5 esingawakha futhi siwasebenzise sibonga izingcezu zeLego. Ngalokhu sizoqala ngezicucu zeLego esingazithola kunoma iyiphi indlu nesitolo, kepha kulowo nalowo msebenzi sizodinga nezinye izinto ezifana nebhodi le-Arduino MEGA, ibhodi le-Raspberry Pi, amalambu e-LED noma i-LCD screen. Konke kuzoya ngohlobo lwephrojekthi esifuna ukuyenza.
1 Icala le-Raspberry Pi
2 I-flashlight ehlanganisiwe
3 Ikhamera yezithombe
4 I-robot eyenziwe ekhaya noma i-drone
5 Iphrinta ye-3D
6 Ingabe yiwona kuphela amaphrojekthi akhona?
Icala le-Raspberry Pi
Kungenzeka kube yiphrojekthi endala futhi ethandwa kakhulu enezicucu zeLego (ngaphandle kokubheka ukwakhiwa kwezingane). I-proyect iqukethe i- dala izindlu ezahlukahlukene ukuvikela nokumboza amabhodi we-Raspberry Pi. Ukuzalwa kwayo kwakubangelwa ukuthi umdali wayedinga ukusekelwa ukuze onge futhi abe namabhodi amaRaspberry Pi amaningana. Kungakabiphi, kwatholakala ukuthi izingcezu zeLego zingaphindeka kabili njengecala elikhulu lamabhodi e-Raspberry Pi. noma olunye uhlobo lwebhodi le-SBC kanye nokuba usekelo olukhulu lwemisebenzi ethile.
Ngokomthetho, singakha isidumbu esinjalo ngezingcezu zeLego esizifunayo, kepha kufanele cabanga ngezikhala ezingenalutho okufanele sizishiye ukwenza ukuxhumana ngamachweba we-Raspberry Pi.
Uma singafuni ukwakha leli cala noma sifuna ukusebenzisa izingcezu zeLego ngomunye umsebenzi, singahlala silithenga leli cala ezitolo eziku-inthanethi ezifana neAmazoni. Singalithola leli cala elinemibala ngentengo efana namacala asemthethweni futhi lihambisana ngokuphelele namamodeli weRasbperry Pi.
Iphrojekthi ye-flashlight edidiyelwe ingeyokuqala futhi ihlangana nokuba nesikhiye esihle esihle nezicucu zeLego. Umqondo ukusebenzisa ibhulokhi enkulu noma ucezu lweLego bese ubhoboza uhlangothi lwengcezu ukufaka ukukhanya okuholelekile. Ngaphakathi kwebhulokhi yeLego, evamise ukuba nomgodi, sifaka ibhethri, ikhebuli neswishi ukwenza isibani sikhanyise noma cha. Ngakolunye uhlangothi lwebhlokhi singangeza iketanga nendandatho ukuthola futhi ukhiye wokuqala ongasebenza kabili.
Le phrojekthi yangempela ingakhiwa yinoma ngubani futhi asidingi ukutshala imali enkulu ukuthola imiphumela emihle ngisho nokubunjwa kwesibani koqobo ngenxa yokwakhiwa kweLego. Awudingi noma iyiphi i-elekthronikhi noma ingxenye etholakala kanzima, lokhu kungaba impumelelo yale phrojekthi.
Ukwakha ikhamera ngezingcezu zeLego kuyinto elula ukuyakha, yize kungeyona eshibhile noma eyonga iphrojekthi njengaleyo eyedlule. Ngakolunye uhlangothi, sizodinga iPiCam, okusajingijolo pi Zero W, ibhethri elishajekayo, isikrini se-LCD neswishi. Ngakolunye uhlangothi kufanele sihlanganise futhi sihlanganise yonke i-elekthronikhi nePiCam, ngemuva kwalokho, bese sifaka abahlanganisiwe endlini eyakhiwe ngamabhulokhi eLego, indlu esingayiguqula ngokunambitheka nesidingo sethu, sakhe ikhamera yakudala, ikhamera yesimanje yedijithali noma umane ikhamera endala yePolaroid. Esigcinweni se- Okuhlelekile Uzothola izibonelo zamaphrojekthi anezicucu zeLego ezizokuvumela ukuthi ube nekhamera enamandla kepha enomoya we-retro noma wenze namakhamera ngaphandle kwezicucu zeLego.
I-robot eyenziwe ekhaya noma i-drone
Mhlawumbe iphrojekthi endala kunayo yonke kodwa futhi enye yezinzima kakhulu ukuyenza ngezicucu zeLego. Umqondo ukudala izindlu nokusekelwa kwamarobhothi adalwe ngezicucu zeLego. Impumelelo ibe njalo yokuthi ILego ithathe isinqumo sokwakha amakhithi amaningi nangaphezulu anamasondo anamathiselwe ebhlokhi. Lokhu kuvumela ukuthi kwakhiwe amarobhothi angamaselula ngisho nezincane kakhulu ukwakha nokubamba iqhaza ezimpini zamarobhothi ezidumile. Kepha intshisekelo kaLego kumarobhothi idlulele ngale kokunikeza izingxenye zabakhi futhi yethule uhla lwayo lwamarobhothi namarobhothi isebenzisa izingcezu zeLego nezinto zamahhala.
Ngakho-ke, ikhithi edume kakhulu ibizwa Iziphepho zeLego, ikhithi yokuhlanganisa irobhothi elisebenzayo elinezicucu zeLego. Okubi ngaleli kit kungamanani alo aphezulu. Intengo okungekho wonke umuntu ongakwazi ukuyikhokhela. Kepha lokho akusho ukuthi awukwazi ukusebenzisa izingcezu zeLego kumarobhothi akho, kude nawo. Ngaphambi kwalawa makhithi, abantu basebenzise izingcezu zeLego ukwenza amarobhothi abo futhi uma sivakashela indawo yokugcina yemiyalo Uzothola amaphrojekthi amaningi awakha irobhothi kusuka ezingcezwini zeLego.
Ukuphrinta kwe-3D nakho kuye kwazuza ezingcezwini ze-Lego, yize kungenampumelelo njengasemhlabeni we-DIY noma kumarobhothi. Kodwa-ke, kunamaphrojekthi akha iphrinta ye-3D enezicucu zeLego. Impumelelo encane yale phrojekthi, okungenani uma iqhathaniswa namaphrojekthi wangaphambilini, Kungenxa yokuthi inyunyana yezingcezu zeLego ayiqinile ngendlela esingathanda ngayo futhi ikhiqiza ukungazinzi okuthinta ukuphrinta kwe-3D, ukudala izingxenye zekhwalithi empofu.
Izinguquko zakamuva ezithile Amaphrinta e-3D enziwe ngezicucu ze-Lego anciphise lokhu kungazinzile kakhulu futhi izingcezu eziphrintiwe zithola ikhwalithi ephezulu.. Kulokhu isixhumanisi Ungathola amanye alawo maphrojekthi aphatha ukuphrinta izingcezu zepulasitiki ngesakhiwo esenziwe ngezingcezu zeLego. Futhi okuphikisana kakhulu nakho konke lokhu ukuthi bangakha izingcezu zeLego eziningi, bandise amathuba okudala amaphrojekthi weHardware Hardware amaningi ngezingcezu zeLego.
Ingabe yiwona kuphela amaphrojekthi akhona?
Iqiniso ukuthi cha. Impumelelo yezicucu zeLego ilele ekungaphelelweni yisikhathi nasekungaboshelweni kohlobo oluthile noma ithoyizi, elenzile abantu abadala abaningi baye bacabanga ngalezi zakhi zokwakha ukubasiza ngamaphrojekthi wabo we-Free Hardware. Kunamaphrojekthi amaningi angenziwa ngezicucu zeLego kepha iqiniso ukuthi uma ufundile okwedlule, impela manje ucabanga ukwakha eyodwa yazo. Futhi zonke ziyakhanga, ikakhulukazi iphrojekthi yokwakha irobhothi Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Robotics » Amaphrojekthi wamahhala we-Hardware we-5 esingakha ngezicucu zeLego
Lorenzo Iago Sansano kusho
NginguSolwazi Wezobuchwepheshe. Le nkambo ngithenge iphrinta ye-3D (i-Prusa P3 Steel) futhi ngethule abafundi be-ESO bonyaka wesithathu ekunyathelisweni kwe-3D. Sebevele baluphatha kahle uhlelo lwe-TINKERCAD futhi senze izingcezu ezilula. Umqondo wami ukuthi bangakha irobhothi ngezingxenye eziphrintiwe futhi bathenge ibhodi ye-Arduino nezinye izinto zikagesi.
Ngibonile amanye amakhasi e-Web lapho engingakhetha khona kepha abafundi bami banesisekelo esincane kakhulu se-elekthronikhi futhi ngingaba nentshisekelo kokuthile okulula kakhulu futhi okusebenzayo.
Ungangincomela okuthile kimi?
Phendula uLorenzo Yago Sansano
Sanibonani! Imininingwane emihle kakhulu. Ngiyabonga!